Rehefa tsy voaray an-tanana haingana : mitarika amin’ny famonoan-tena ny fahaketrahana ara-tsaina | NewsMada
Rehefa tsy voaray an-tanana haingana : mitarika amin’ny famonoan-tena ny fahaketrahana ara-tsaina
Mitombo ny olona mamono tena eto amintsika araka ny antontanisa eny amin’ny hopitaly. Mila fantarina ny fisehoan’izany ety ivelany ahafahana manampy ireo tratran’ny fahaketrahana ara-tsaina tsy ho tonga amin’ny famoizam-po
Ny taona 2013, nahatratra 411 (amin’ny marary noraisina an-tanana 4842) ny olona namono tena ka voatery niditra hopitaly teny amin’ny HJRA, araka ny antontanisa azo. Manome ny taha 5,90% izany, izay ambony tokoa. Mbola nanamafy ny zava-misy ny tomponandraikitry ny sampandraharaha misahana ny fahasalaman’ny saina ao amin’ny CHUSSPAnalakely, profesora Rajaonarison Bertille, fa mitombo isan’andro ny isan’ny olona mamono tena ka tonga eny amin’ny hopitaly. Endrika iray isehoan’ny fahaketrahana ara-tsaina ny famoizam-po mitarika hatramin’ny famonoan-tena, hoy ny fanazavany ihany teny amin’ny HJRA, omaly. Indraindray anefa, tsy mila fampiasana fanafody ny fitsaboana ny fahaketrahana ara-tsaina, fa mitaky tohana ara-tsaina avy amin’ny mpitsabo manokana na koa psychologue fotsiny, miaraka amin’ny fianakaviana sy ny fiarahamonina. Rehefa lalina ny fahaketrahana, ampidirina ny fanafody mandritra ny enim-bolana, mety hilana fidirana hopitaly na fanohizana ny fitsaboana any an-tokantrano.
Antony faharoa anatonan’ny olona ny sampandraharaha misahana ny fahasalaman’ny saina ny fahaketrahana ara-tsaina eto amintsika. Taorian’ny fanadihadiana ireo olona mamono tena tonga eny amin’ny HJRA, fantatra fa vokatry ny fahaketrahana ara-tsaina no mitarika azy ireo hiroso amin’ny famonoan-tena amin’ny ankapobeny. Miseho amin’ny fahalainana hihetsika na hieritreritra aza ny fahaketrahana ara-tsaina. Marary an-doha matetika, tsy mahita tory, tsy misakafo, mijaly eritreritra, tsy mahita fifaliana. Lasa tsy manana faharisiham-po amin’ny fahavelomana ilay olona ketraka ara-tsaina ary tsy afaka miatrika ny fiainana intsony. Mitarika amin’ny famonoan-tena izany matetika rehefa tsy voaray an-tanana haingana miaraka amin’ny mpitsabo ny aretin-tsaina (psychiatre sy psychologue).
Roa ihany ny psychiatre mivoaka
Eto amintsika roa isan-taona ny psychiatre mivoaka eny amin’ny fakiolten’ny fianarana ho mpitsabo, amin’ny manampahaizana manokana 50 mahazo mari-pahaizana. Psychiatre iray, misahana Malagasy 1 tapitrisa raha mpitsabo iray mikarakara olona 1 000 ao La Réunion. Ny Université catholique de Madagascar (UCM) irery ny sekoly ambony tokana manofana ho psychologue. Nivoaka ny volana novambra 2016 ny andiany voalohany. Tamin’ny mpianatra 40 niditra taona voalohany, dimy monja no tafavoaka hatramin’ny farany. Iray amin’ireo miasa eny amin’ny sampana misahana ny fahasalaman’ny saina ao amin’ny CHUSSP Analakely. Ankoatra izay, tsy ampy ny fotodrafitrasa mandray an-tanana ny fahasalaman’ny saina. Roa ny hopitaly lehibe eny Anjanamasina sy any Morafeno, Antsiranana. Efa misy ny foibe misahana ny neuropsychiatrie eny amin’ny hopitaly lehibe ao Mahajanga, Fianarantsoa, Toamasina ary Toliara. Eto Antananarivo, roa (Cenhosoa sy HJRBefeletanna) ny sampana misahana izany ho an’ny fanjakana miampy toerana roa tantanin’ny tsy miankina eny Ambohibao sy Imerintsiatosika. Ny fanafody rahateo lafobe ka tsy takatry ny olona sahirana ara-pivelomana.
Andro maneran-tany ho an’ny fahasalamana
Natokan’ny OMS amin’ny fahaketrahana ara-tsaina ny lohahevitra amin’ny Andro maneran-tany ho an’ny fahasalamana rahampitso, satria mahatratra 350 tapitrisa ny olona ketraka ara-tsaina eran’izao tontolo izao. Misy ny hetsika eny amin’ny HJRA hanamarihana izany. Hanao fitiliana maro mifandraika amin’ny fahasalaman’ny saina ny mpitsabo. Eo koa ny fanetanana ny mponina momba ny faahketrahana ara-tsaina izay mila fantarina sy resahana.
Vonjy A. /Sary :Fanou